Hamro Yatra | » प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा अंग्रेजीमा बाेल्न आवश्यक छ? प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा अंग्रेजीमा बाेल्न आवश्यक छ? – Hamro Yatra
> प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा अंग्रेजीमा बाेल्न आवश्यक छ?
प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा अंग्रेजीमा बाेल्न आवश्यक छ?
काठमाडौं, वैशाख २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार दिउँसो देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका छन्।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाभाइरसविरूद्धको लडाइँमा सरकारले अहिलेसम्म गरिरहेका काम र पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए।
नेपाली भाषामा गरिएको सम्बोधन सकिनै लाग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले अंग्रेजी बोल्न थालेका थिए। देशवासीको नाममा गरिएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजी बोल्न थालेपछि धेरैलाई अचम्म लागेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले नेपाली नबुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि प्रधानमन्त्रीले अंग्रेजीमा सम्बोधन गरेको बताए। अंग्रेजी भाषामा रहेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा नेपाललाई अहिलेसम्म गरेको सहयोगका लागि कृतज्ञता र आगामी दिनमा सहयोगको आग्रह गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा यो महामारीलाई कुनै एक देशले मात्रै परास्त गर्न नसक्ने भएकाले सामूहिक प्रयासका लागि आह्वान गरेका छन्।